Fiirso- Moment History Society oo sawirro iyo xog taariikhi ah idiin heysa | Explorations in History and Society
Fiirso- Moment History Society oo sawirro iyo xog taariikhi ah idiin heysa
Fiirso- Maxaad ka taqaanaa Kali taliyayaashii ugu darnaa Caalamka?
Kaligii taliye waa shaqsi awood aan xad lahayn ku xukuma dal, inta badanna xukunkiisa ku saleeya hab arxan daran.
Taariikhda dunida waxaa soo maray qaar badan oo kaligii taliyayaal ah, kuwaas oo waqti dheer soo xukumayay dalalkooda oo awood iyo caburin xad dhaaf ahna ku hayay umadahooda.
Magacyada soo socda waa Kaligii taliyayaashii ugu darnaa ee dunida soo maray oo taariikhdana lagu qoray:
Iiddi Amiin wuxuu ahaa madaxweynihii 3-aad ee Uganda. Xukunkiisana waxaa lagu yaqiinay naxariis daro iyo ku xad gudbid xuquuqda aadanaha, arrintaas oo horseedday in Iiddi loogu magac daro “Kawaanlihii Uganda”.
Dad badan oo mucaarad ku ahaa ayuu Iiddi Amiin ku abaal mariyay jirdil aad u fool xun illaa ay ka geeriyoodeen. Waxayna taariikhdu xustay inuu Iiddi mas’uul ka ahaa dilka 10 kun illaa 50 kun oo qof, kuwaas oo loo dilay qaabab kala daran oo ay ka mid tahay jar jaridda qaybo jirka ah iyo xubnaha taranka, maqaar siibid iyo falal kaloo arxan daran.
Iiddi Amiin wuxuu geeriyooday 16-kii August, 2003.
Hidiki Togo wuxuu ahaa Janaraal ka tirsan ciidamadii Ibaraadooriyaddii Japan, isaguse wuxuu si gaar ah ugu oomanaa inuu awoodda dalka la wareego.
Xilal badan ayuu soo qabtay oo ay ka mid ahaayeen Wasiirka arrimaha dibadda, Wasiirka Ganacsiga, Wasiirka arrimaha gudaha, Wasiirka ciidamada, Wasiirka waxbarashada, iyo Ra’isul wasaaraha.
Hadal uu mar warbaahinta siiyay ayuu ku sheegay inuu isagu mas’uul ka ahaa xiriiir lala yeesho Naaziyiintii, isla markaana uu rajo ka qabay sameynta ciidan lala wadaago Hitler.
Togo ayaa mas’uul ka ahaa weerarro badan oo lagu qaaday dalal ku yaala qaaradda Aasiya, iyo waliba dilka 5 milyan oo ruux intii lagu jiray dagaalkii 2-aad ee dunida.
Dagaalka ka dib waxaa la qabtay Hidiki Togo, waana la dilay 23-kii December, 1948-kii isagoo lagu eedeynayo inuu dambiyo dagaal geystay.
Mingisto Hayla Maryam:
Mingisto Hayla Maryam wuxuu ahaa siyaasi caan ah oo dalka Itoobiya hogaamiyay intii u dhexeysay 1974-kii illaa 1991-kii. Sidoo kale wuxuu ahaa Korneyl ka tirsanaa Dirgiga iyo Maliishiyaadkii Shuuciyadda.
Maryam wuxuu billaabay olole loogu magac daray argagaxii guduudnaa oo lagu tilmaamay inay ahayd ololihii ugu xumaa ee abid Afrika ka dhaca oo dil wadareed lagu geystay.
Tirada dilalka uu Hayla Maryam ka mas’uulka ahaa waxay gaareen 50 kun illaa 200 oo kun, dagaaladii sokeeye ka dibna waxay maxkamad ku eedeysay Hayla Maryam inuu geystay xasuuq wadareed, inkastoo uu markaa ka dib isagu u baxsaday dalka Zimbabwe.
Kim Il Song:
Kim Song wuxuu ahaa hogaamiye dalka Waqooyiga Kuuriya u horkacay waddo argagax leh, wuxuuna ahaa aabaha hogaamiyihii geeriyooday ee dalkaas Kim Jong Il iyo waliba awoowaha Boqor Jon Yan.
Kim Song wuxuu dalka Mareykanka ku eedeeyay inuu ka mas’uul yahay dhibaatooyin ka jiray dalka Kuuriyada Waqooyi. Isagoo intaas raaciyay in mushkiladahaas uu Mareykanku ka dambeeyo ay ka mid tahay faafinta cudurro halis ah oo dadka Waqooyiga Kuuriya lagu dhex faafiyay.
Sida ay dad xog ogaal ahi ku warrameen, Kim wuxuu la mid ahaa Hogaamiyihii kaligii taliyaha ee Stalin. Wuxuuna amray in la xasuuqo dad badan si loo cabsi galiyo bulshada. Amarradaasna waxay dhaleen geerida 1.6 milyan oo qof.
Kim ayaa geeriyooday 8-dii July, 1994-tii
Pol Pot wuxuu sanadihii u dhexeeyay 1975 illaa 1979 ahaa hogaamiyaha kooxdii Khmer Rouge la oran jiray ee shuuciyiinta ahaa. Intii lagu jiray xukunka Pol Pot waxaa geeriyoday dad lagu qiyaasay 2.5 milyan oo Komboodiyiin ah, kuwaas oo cudurro iyo gaajo u dhintay.
Dadka khubarada ah ayaa rumeysan in dhimasho intaa ka badan ay dhacday mudadii uu Pol Pot maamulayay dalkaas. Wuxuuna Pot la yimid fikradda sinaanta oo uu hab cajiiba ku keenay, isagoo dadka magaalada ku nool ku amray inay u guuraan baadiyaha iyo dhul beereedyada, halka uu dadka baadiyaha deganna usoo raray Magaalooyinka si ay uga shaqeystaan.
Qof kasta oo fikraddan ka hor yimaada wuxuu la kulmi jiray cadaab daran iyo dil, inkasta oo ay ugu dambeyntii fashilantay fikraddii sinnaanta ee Pot, lana burburiyay dhaq dhaqaaqii Khmer Rouge .
Pol Pot wuxuu dhintay isagoo hurdaya bishii April 15-keedii, 1998-dii. Geeridiisana waxaa lagu sheegay mid ka dhalatay xanuun wadnaha kaga dhacay.
Joseph Stalin wuxuu xukumayay dalkii la oran jiray midowga Soofiyeeti in ka badan 20 sano. Wuxuuna hormariyay Ruushka, isagoo sidoo kalena la yimid siyaasado dhiirigalinaya argagaxinta shacabka.
Qorshayaashii warshadeynta deg degga ah iyo siyaasadihii Beeraha ee uu la yimid Stalin ayaa sababay inay Malaayiin qof u dhintaan Gaajo. Tira koobkana waxaa lagu helay waqtigaas in 2.6 miilyan illaa 10 milyan oo ruux ay Gaajo daran u dhinteen.
Stalin waxaa kaloo lagu bartay ololihiisii baabi’inta ee waynaa, taasoo ahayd olole lagu dilayay qof kasta oo afkaarihiisa ka hor yimaado. Waxaana taariikhaha Soofiyeetka lagu xusay in mudadii u dhexeysay 1921 illaa 1953 ay dhinteen dad gaaraya 2.9 milyan oo qof.
Stalin wuxuu dhintay 5-tii March, 1953-kii ka dib markii uu xanuun maskaxda kagasoo booday.
Adlof Hitler wuxuu xukumayay Jarmalka 1934 illaa 1945. Wuxuuna ahaa nin xukun adag oo lagu tiriyo mid ka mida Kaligii taliyayaashii ugu naxariista darnaa ee dunida soo mara.
Hitler ayaa intii uu xukumayay Jarmalka wuxuu sababay inuu dalkii Jarmalka galiyo dagaalkii 2-aad ee dunida oo ay ku geeriyoodeen illaa 17 milyan oo dad Jarmal ah.
Hitler ayaa la rumeysanyahay inuu is dilay 30-kii April, 1945-kii maalmo yar ka dib markii ciidamadii Isbahaysiga ee isaga ka horjeeday ay si sahlan ula wraeegeen Barlin.
Maw Tisi Tong:
Maw Tisi Tong wuxuu ahaa hogaamiye Shuuci ah oo Shiinaha soo maray, waana ninkii sameeyay Jamhuuriyadda Shiinaha ee Shacbiga ah.
Shantii sano ee ugu horeysay xukunkiisa wuxuu amray dilka muwaadiniin tiradoodu ay u dhexeysay 4 illaa 6 milyan oo qof. Wuxuuna la yimid Barnaamijkii shacbiga ahaa iyo booditaankii waynaa ee xagga hormarka loogu bootinayay Shiinaha iyo waliba kacdoonkii aqoonta.
Barnaamijkii Shacbiga waxaa ka dhashay geerida 20 milyan oo muwaadiniin Shiinees ah, iyadoo sidoo kalena la dilay qof kasta oo dhaliilay Barnaamijkaas, markaas oo ay tirada dadka siyaasadahaas caburinta ah u dhintay gaartay 78 milyan oo qof.
9-kii September, 1976-dii ayuu Maw Tisi Tong u geeriyooday xanuun wadnaha ah isagoo jira da’da 82 sano.
” Kacaanku waa ku tala jiray inuu isbedel ku sameeyo Diinta Islaamka. Waayo dawlad Shuuci ah ayuu ahaa. Waxaa taas daliil u ah nidaamkii Xeerka Qoyska ee uu qaatay. Kaasoo ka horimanayey Diinta Islaamka. Ku dhawaaqistiisu waxay muujinaysay kacaanku dagaalkii uu kula jiray Diinta. “
” 1970-kii Bishii Oktoobar ayey ahayd maruu Maxamed Siyaad Barre khudbad ka jeedinayey halka loo yaqaanay Daljirka Dahsoon. Waxaan aniga iyo nin saxiibkay ahaa Shiikh Yuusuf Aden ka soo lugaynay Taree Biyaano. Ma haysan lacag aan Tagsi ku soo raacno. Niman dhalinyaro ah ayaan ahayn. Lug ayaan ku nimid anagoo danaynayna hadalka Madaxweynuhu jeedinayo. “
” Khudbadii Madaxweynaha waxaa ka mid ahayd. Waxaan qaadanay Mabda’a Hantiwadaaga. “.
” Waa la isweydiin karaa xagee ka soo qaadanay Hantiwadaaga?
” Waxaan ka soo qaadanay Diinta Islaamka. “
” Waxaa Nabigii iga soo gaartay raali allaha ka noqdee. Ma oran salaalahu calayihi wa salam. Iyadoo duulan la yahay inuu dadka isugu daray saadkii (sahaydii). “
” Yaa u sharixi kara dadweynaha mabda’a Hantiwadaaga ee la qaatay ayuu Madaxweyne Siyaad Barre weydiiyey dadkii Khudbadiisa dhegeysanayey?. Aan idiin sheego ee waxaa u sharixi kara nin aqoon yahan ah,nin wadaad ah oo si fiican u bartay Diinta. Wadaad xume meel ugama fura. Wadaad xume waxaan ugu yeeray. Ninka Diinta intuu wax ka bartay oran doona Hantiwadaaga iyo Islaamku isma waafaqsana.”
” U noqosho dhaqankii ay lahaayeen Saxaabadii Rasuulka iyo labadii jiil ee ka dambeeyey. Asalka Salafiyada waa in diinta islaamka laga qabsadaa Kitaabka iyo Axaadiista, Axkaamtana laga qaataa Kitaabka iyo Xadiiska saxiixa ah. ” Waxaa xilliyadii dambe Soomaaliya la oran karay waxaa nooleeyey fikirka Salafinimadda Shiikh Nuur Cali Colow.
” Waxay ka kooban tahay qaybo dariiqooyinka ka mid ah oo ku caan baxay inay akhriyaan digri waqtiyo oo kala duwan,hadba qolo walba siduu Shiikhoodu ugu tilmaamo si ay u gaaraan martabad sare ee xagga ruuxda darajo ay u yaqaanaan Al-awliyaa amaba awliyonimo. Sideedaba Suufiyadu ma ahan dariiqo gaar ah ama diin gaar ah amaba mad-hab gaar ah ee waa dariiqo qofku u marayo siduu Ilaahay ugu dhowaan lahaa sida suufiyiintu aaminsan yihiin. Waa la Isku khilaafaa Ahlu Suufinimadda. Dadka qaar ayaa ku sheega inay ka soo jeeday koox muslim ah oo Masjidka Nebiga ag joogtay. Ninka lagu magacabo Ibni Jawsi Kitaabkiisa Tablis Ibliis waxaa uu ku sheegaa Suufiyiintu inay ka soo jeedeen Sufa Ibna Mara ninkan oo hooyadii nidar ku gashay inay suridoonto tiirka Kabcada markay dhasho ka dib si uu ugu go’o diinta. Markaas ayaa loo bixiyey Sufi. Waxaa kaloo la sheegaa inuu Sufi macna ahaan ka soo jeedo eray Giriig ah oo la macna ah Falsafa. “
Halgankii Xornima doonka Soomaaliyeed ee xoogaystay dagaalkii labaad ee dunida kadib ayaan ka marnayn dhaqdhaqaa Islaanimo. Sanadkii 1952-dii ayaa ururkii Rabida Al Islaamiya ee uu hogaaminayey Shariif Mara Cadde laga dareemay inuu sansaan Islaamiyiin lahaa. Waxaase jirtay inuu ahaa ururkaasi mid Wadaniyad Carabeed huwan. Taas ayaa markii dambe dibadda u soo baxday kolkuu Shariif Maracadde si bareer ah u taageeray afkaartii Jamaal Cabdinasir hogaamiyihii Wadanka Masar ee caanka ahaa, sida adagna ula dagaalamay dhaqdhaqaaqii Ikhwaanu Muslimiinka Masar.
Sanadkii 1967–dii ayaa waxaa dibada isa soo dhigay Jamciyad la oran jiray Al- nahda oo ay horseed ka ahaayeen dhalinyaro wax ku soo baratay wadanka Masar iyo Sacuudiga, ayna ka mid ahaa Shiikh Cabdiqani Shiikh Maxamed iyo Sheikh Maxmed Garyare iyo Shariif Calawi oo ku xiraa ururkii Ikhwaanu muslimiinta Masar. Iyo sheikh Maxamed Macalin Ilaahay ha u naxariiste oo isagu Masar ka soo noqday. Waxaa sal u ahaa dhaq-dhaqaaqaas Islaamiga ah ee Soomaaliya ka hanaqaadayey Maktabad lagu iibiyo kutubta diiniga ah ee la jaanqaadaysay xarakada guud ee Islaamiyiinta. Shiikh Cabdiqani Shiikh Maxamed kolkuu uu tegey Kuweyt dabayaqadii lixdamaadkii waxaa uu la kulmay raga ugu waaweynaa Ikhwaanka wadanka Kuweyt oo uu ka mid ahaa Yuusuf Xija iyo Cabdalla Mudawac. Kutubta maktabadaas lagu iibinayey waxay u badnaayeen kuwa ay qoreen raga hormuudka u ahaa Ikhwaanka. Maktabadaas ayaa ahayd halka loo soo mariyo shacabka Soomaaliyeed aqoonta diinta ee baraarugsan. Waxaa kaloo jiray xarraka Islaamiya oo la oran jiray Itixaad Al-shabaab Muslim, ayna asaasayaal ka ahaayeen Shiikh Cabdikariim Xirsi iyo Sheikh Cabdulqaadir Shiikh Maxamuud,kana mid noqtay biloowga asaaska Islaamiyiinta Soomaaliya.
Ururkii Ansaarul Sunna Al-Muxamadiya waxaa madax u ahaa Shiikh Nuur Cali Colow (Nasurdiin) waxa uu xanbaarsanaa fikirka salafiyadda. Gabyaagii caanka ahaa ee Cismaan Yuusuf Keenadiid ayaa xilligii soo if baxeen Islaamiyiintu kontomaadkii dabayaaqadiisii waxaa ka mid ahaa tixdan gabaygiisii ahaa Yaw Garniqin Doona oo uu malaha markaas ula jeeday wadaadka Shiikh Nuur Cali Coloow oo isagu afkaarta salafiyiinta la yimid wadanka:
Muslinkii4 Gumaysiga ku jiray Garay Xumaantiiye
Guhaad iyo wuxuu Wada qabaa Gayrashiyo ciil e’
Gidigii islaamkii haduu Gees isugu Leexday iyo
Gaaaladaynu Ogsoonahay yaw Garniqidoona
Culumadii Gadaalkan waxaa Galay Khillafweyne
Khaliifyadatan Guutadawata iyo Calanka Giirgiiran
Iyo Gabanada soo Baxay Dhowaan yaw u Garniqi doona
Shiikh Nuur Cali Colow ayaa la oran karayaa sida dad badani qabaan inuu ahaa horseedaha Salfiyiinta Soomaaliya ee Qarniga 20-aad. Waxaa uu ahaa ninka bilaabay baraaruga Islaamka ee waalidka u noqday. Inkastoo dhalinyaradda dambe aanay aqoon dururgsan u lahayn Shiikh Nuur. Waa lagu dhibay oo lagu dhaleeceey fidinta afkaarta Salafiga ah ee Soomaaliya. Waqti dad yari fahansanaayeen baraaruga Islaamka .
Shiikh Nuur Cali Colow ayaa ka mid ahaa dhalinyaradii Islaamiyiinta ahaa ee wax ku soo bartay Masar kuwoodii ugu horeeyey, kana soo qalin jebiyey Jamacadda Al-Azhar, kuna takhasusay Shareecadda iyo Qaanuunka. Isagoo Tafsiirka ka akhriyi jiray Masaajidka Marwaas ee ku dhowaa agagarka Baar 909 iyo suuqa Xamar weyne. Wuxuu inta badan ka hadli jiray oo dadku u sheegi jiray arrimaha Towxiidka iyo in laga fogaado Shirkiga noocuu doono ha ahaadee. Shiikh Nuur Cali Colow dhowr jeer ayaa xabsiga loo taxaabay. iyadoo loo arkayey inuu ka mid yahay wadaadada asalka u ahaa dacwadda Islaamka ee shacabka Soomaalida lagu baraarujinayo diintooda.
Curashadii kacaankii Oktoobar ayaa gebi ahaanba waxaa la mamnuucay axsaabtii siyaasadeed ee wadanka ka jirtay. Kuwaas oo kor u dhaafayey in ka badan 80 (sideetan) xisbi. Dhaq-dhaaqayadda Islaamiyiintu waxay ka mid noqdeen axsaabtaas irridaha loo laabay. Waaga cusub ee Soomaaliya u beryay kama muuqan farax ay Islaamiyiintu ku farxaan isbedelkaas askartu samaysay ee ay awooda dalka ku maroorsadeen. Waxaa biloowgii Kacaankaas jiray fursad aad u yar oo ay Islaamiyiintu kaga faa’iidaysteen. Taas ayaan sababtay in Shiekh Cabdulqani Sheikh Maxamed loo magacaabo Wasiirkii Caddalaad ee dawladaas Kacaanka ahayd. Walow markii dambe ay isla jaanqaadi waayeen Islaamiyiinta iyo Kacaankii Hantiwadaaga Cilmiga ku dhisan qaatay.
Shiikh Cabdulqadir Nuur Faarax ayaan weydiiyey sababta Kacaanku ugu magacaabay jagooyin muhiim ah rag ka tirsanaa Islaamiyiinta?
’’ Kacaanka ayaa biloowgiisii la yimid fikrada ah Ayaa taqaan in lagu bedelayo Maxaad taqaan Shiikh Cabdiqani Shiikh Mxamed iyo Shiikh Maxamed Garyare ayaa ahaa niman aqoon u leh hawsha loo dhiibay iyo weliba askarta afgembiga samaysay oo aan aqoon u lahayn hawshaas ay hayeen. Mar dambase Kacaankii iyo iyagu waa ay isla soconwaayeen.’’
Sanadkii 1971-dii ayaa si qarsoodi ah waxay Islaamiyiintu u asaaseen dhaqdhaqaaq lagu magacaabi jiray Al-ahli. Waxaa ka mid ahaa ragii maskaxda u ahaa Shiikh Cabdulqaadir Shiikh Maxamuud oo mar Kacaankii Oktoobar xiray. Iyadoo xubnaha ugu cadcadaana ay ka mid ahaayeen Cabdiwaaxid Xaashi, Cabdicasiis Faarax, Salaad Cabdulqaadir Aw-Muuse, Saciid Maxamud xaaji iyo rag kaleba. Waxaa la oran karay asaasida Xarakadda Islaamiga ahayd ee Al-Ahli waxay u muuqanaysay talaabo is miidaamin naf huridnimo ah. Waayo may dhici karin in Kacaanka Oktoobar oo dardartiisii qabay waqtigaas laga dhex abuuro Xarrakad Islaami ah oo ka soo horka jeeday afkaartii Kacaanka Hantiwadaaga ahaa.
Al-ahli waxaa saldhig u ahaa Masjidkii Cabdulqaadir(Maqaamka Cabdulqadir) magaaladda Muqdisho ee Ceelgaabta ku yiilay. Waxaa halkaas inta badan mawaadiic Diini ah, Tafsiirka Quraanka iyo dacwad Islaamiga ahba ka soo jeedin jiray Allaha u naxariistee Shiikh Maxamed Macalin oo si geesinimo leh u waday ku baraarujinta Islaamka shacabka Soomaaliyeed.
Shiikh Maxamed Macallin wuxuu ka mid ahaa tiirirka Islaamiyiinta Soomaaliya kuwooda ugu magaca weyn. Taasoo ilaa iyo maanta lagu xusuusto. Isku celcelina waxaa Kacaankii Hantiwadaaga ahaa xiray 9 (sagaal) jeer. Intii u dhexeysay 1976-dii ilaa 1982-dii waxaa uu ku xiraa Xabsigii aadka u adkaa ee la oran jiray Labaatan Jirow iyo Laanta Buur. Marka la tiriyo mudadda uu xabsi ku jirayna waxay noqonaysaa 11 Sano oo waqtiyo kala duwan ahaa.
Shiikh Maxamed Macallin tafsiirkii Quraanka ee uu ka akhriyi jiray Masjidaka Shiikh Cabdulqaadir ee Muqdisha ayaa ahaa meel ay ku xirnaayeen waqtigaas dhalinyaro baahi u qabay barashada diinta Islaamka. Goobtaasi waxay ahayd meeshay ka bidhaamaysay Islaanimada xilli Soomaalidu ku jaahwareersanayd Hantiwadaag Cilmiga ku Dhisanaa.
Sanadkii1972-dii ayaa Kacaankii Oktoobar wuxuu si buuxda u gashaday kabihii Hantiwadaaga. Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax ayaa ii sheegay in Madaxweyne Maxamed Siyaad cadeeyey inaan laba Hantiwadaag jirin. Waxaana uu yiri:-
’’ Hantiwadaageenuna (Soomaalida) waa kan Cilmiga ku dhisan ee Karl Mark iyo Lenin.’’
Sida rag qaarkiis ii weriyeen waxay maalinta hadalkaas uu jeediyey Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahayd maalin Ciid ah. Dr.Yuusuf Xirsi Axmed ayaa ku sheegay Buugiisii Xabsigaygii. In kacaanku kolkuu bilowga ahaa qabanqaabiyey doodo furan oo looga hadlayey Hantiwadaaga Cilmiga ku dhisnaa (ScientificSocialisim) .Talcliinta., Dhaqaalaha iyo siyaasaddaba Sanadkii 1974-tii Waxaa uu yiri:-
’’ Waxaa soo qabanqaabiyey doodo furnaa dawladii kacaanka ahayd.Waxaa madax ka ahaa aqoonyahandaas doodaas hagayey Dr.Maxamad Yuusf Weyrax oo ka mid ahaa aqoonyahanada Soomaaliyeed,isla markaana ahaa Wasiir ka tirsanaa ukuumadii Kacaanka ahayd iyo rag kale oo siyaasiyiin ahaa.Habeenkii dooda siyaasadda waxaa hagayey Gen.Axmed Saleebaan Dafle Taliyihii Ciidanka Nabad Sugida (NSS-ta). Doodahan ayaa macnaha kacaanku uga gol lahaa ahayd in uu ogaado fikirka aqoonyahanadda iyo siday ula jaanqaadayaan Kacaanka oo ku jiray marxaladiisii uu karaarka badnayd.’’
Prof.Yuusuf Xirsi Axmed5 ayaa doodii Waxbarashada ee kulan fikradeedkaas waxaa uu ka soo jeediyey inaanay shardi ahayn in qofku meeshuu wax ku soo bartay fikirka laga haysto soo qaadanayo.Waxaa uu tusaale u soo qaatay Karl Marx oo ku soo ababay dal Hantigoosad ah, kana soo jeeday Yuuhuud oo lagu yaqaan lacag jacaylka. Inuu la yimid fikirka Shuuciyadda, kana soo horjeedsaday fikirkii Hantigoosadka ee dalka Jarmalka loo dhaqmayey.
Hadalkii Prof.Yuusuf Xirsi (Ilaaha ha u naxariistee) ka jeediyey doodii furayd ee aqoonyahanaddu is dhaafsanayeen ayaa kacaanyahanadii waqtigaas aad u qaad-qaadeen. ’’Karl Marx hal abuurihii Shuuciyadda ayaa Yuuhuudi lagu sheegay.’’ Kacaankii ayaa ka baqay in kacdoon dadweyne abuurmo. Waayo Soomaalida ayaa ah dad aan Yuuhuuda Diin ahaan u jeclayn. Iyadoo kacaanku dadweynaha Soomaaliyeed ugu baaqayey inay raacaan dhabada uu jeexay Karl Marx. Waxaa hadalkii Dr.Yuusuf Xirsi ee ahaa Karl Marx inuu Yuhuudi ahaa dhibsaday horboodayaashii kacaankii Hantiwadaaga Cilmiga ku dhisnaa ilaa iyo Madaxweyne Siyaad Barre. Taas oo sababtay in Prof.Yuusuf Xirsi lagu asteeyo shabadda kacaandiidnimadda.
” Habeenkii markii dardaarankii wadaadada laga qoray lay keenay.Ayaan arkay wiil 17-jir ahaa oo ku jira. Wiilkaaswadaadka ahaa, marka hore wuxu sheegtay 18-jir. Balse, markii dambe wuxuu sheegtay 17-jir. Sidaa darteed wiilkaasi da’ahaan ma ahayn dil dabadeedna waxaan damcay inaan la socodsiiyo cidii ku shaqada lahayd, si aan ugu sheego wiilka 17-jirka ah oo markii hore 18-jir sheegtay inuu ku jiro, si looga baajiyo dilka. Hase yeeshee,wiilkii intaan talaababa la qaadin, ayuu muusanow ku dhuftay oo uu yiri: War Jannada hayga reebina, waar ummadda hayga reebina, wallaahi 18-jir baan ahay. Wiilkaas yar caqiidadiisu xoogay lahayd iyo sida iimaankiisu ahaa, aad baanu uga yaabnay dhamaantayo. Bal nin la leeyahay berri baa lagu dilayaa, ee ha lagaa baajiyo, oo ku leh dadka hayga reebin ka waran! Sidaa darteed, lagama reebi ee sidii ayaa lagu toogtay.”
” 33-askari oo ciidandamada kala tirsan ayaa toogashada fulin jiray. Sarkaal millateriga ka tirsanaa ayaana subaxdaa ciidanka watay. Sideedaba anaga Asluub ahaan marka la fuliyo toogashada kadib uun baa ribootka naloo keeni jiray. Sidaa aawadeed waxa laga wer-wersanaa in ciidanka toogashada fulinayay soo nabad noqon doonaan iyo inkale.Markaa subaxnimadii anigoo weli xabsiga dhexe ee Muqdisho jooga ayaan arkay laba diyaaradood oo isku dhacay. Markiiba midi dhulkay ku dhacday, oo meel aan xabsigii dhexe ka fogayn ah, tii kalena meel kale oo ka durugsanayd ayay ku dhacday. Dad badan baa cibro ku qaatay arrintaas, oo yidhi waa wax lagu cibro qaato wadaadadii la dilay iyo diyaaradahan isku dhacay”
” Nidaamkii Xeerka Qoyska iyo SinaantaRragga iyo Dumarka rag la yaqaan ayaa ka danbeeyay, Weyrax iyo Maxamed Aden xataa Gollihii Sare ee Kacaanka waxaa loogu sheegay jaranjaradii ex -stadium cones”
” Maalin jimce ah ayay wadaadadu ka ridiyeen masaajidyada sinaanta raga iyo dumark. Iyadoo Maxamed Siyaad ku maqnaa magaaladda Baraawe oo uu kormeer ku tegey maalintaas. Galabtii markii uu ku soo noqday Muqdisho ayaa Janan. Cabdullaahi Shiikh Maxamuud (Matukade) u sheegay Maxamed Siyaad in niman wadaada ahi haystaan magaaladda Muqdisho. Kaliya waxaa ku fillaa in uu masaajidada makarafoonada ka gooyo si aan hadalkooda loo maqal”
Kacaanka Oktoobar wuxuu abaabulay xarumo lagu tababaro dadka,laguna kordhiyo dhinaca fikirka waxyaabo badan amaba la kacaamaynayo. Shaqaalaha dawladda badankooda waxaa la marsiiyey dugsigii Tababarka Xalane oo ahaa meesha lagu sifeeyo sida kacaanku u haystay maskaxda Kacaandiidka iyo kuwa dib u socodka ah. Kama marnayn in qof horay u soo maray Xalane, haddana dib loogu celiyo.
Dr.Yuusuf Xirsi ayaa kaga sheekayey buugiisa Xabsigaygii. Bilowgii Sanadkii 1976-dii mar labaad mar uu galay Xalane. Berigaas Gudoomiyihii Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed Prof.Cabdiraxmaan Caydiid ayaa la sheegaa inuu jeclaystay in Macalimiinta Jaamacadda Ummadda tababar loogu diro dugsiga Xalane. Lama oga Cabdiraxmaan Caydiid waxaa ujeedadiisu ahayd. Waxaase la malayn karaa inuu habacsanaan ka dareemay Barayaasha Jamacadda, Jeclaystayna in dareenkooda kacaanimo la dardargeliyo. Maadaama Prof.Cabdiraxmaan Caydiid ahaa nin si weyn u aaminsanaa Mabda’ Shuuciyadda.
Madaxweyne Maxamed Siyaad waxaa uu khudbad u jeediyey Macalimiinta Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee tababrku uga socday mudada sadexda bilood ah dugsiga tababarka Xalane ku xusay magaca Prof Yuusuf Xirsi. Waxaa uu yiri:-
’’ Waad ogtihiin Yuusuf ayaa Karl Marx ku sheegay Yuhuudi, cidna waxba uma raacan. Hadalo kale ayuu Madaxweynuhu ku gujiyey Yuusuf. Taas oo markii dambe marag fur u noqotay xarigii Prof Yuusuf Xirsi in kacaanku qaniinsanaa’’.
Arrimahaas isku dhex murugsanaa ee talaabooyinka Kacaanku qaadayey sida tababar u furid xubno muhiim ahaa oo ka mid ahaa indheergaradka bulshada Soomaaliyeed. Waxay ujeedooyinkoodu ahaayeen kala hufid Kacaanku kala hufayo arrimaha lagu doonayey in lagu ogaado dhab ahaan cid diidan fikirka Hantiwadaaga. Iyo guud ahaanba hanaan socodka isbedelka nidaamka waqtiga kala guurka ee la doonayey in la sameeyo isbedelo saamayn yeelan kara.
U gogol xaarkii Asaaskii Xisbiga Hantiwadaaga Kacaanka Soomaaliyeed11 ayaa la oran karay waxaa astaan u ahaa barnaamijkii Xeerka Qoyska oo ka soo burqaday maskaxada kuwa u Janjeeray dhinaca Diin la’aanta, aaminsanaana waxaa loogu yeero Hantiwadaaga Cilmiga ku dhisanaa (Scientific Socialisim). Si dadka Soomaaliyeed ee diidanaa waxa socda, kana mid ahaa Culimaa’udiinka, Aqoon yahanada loo cabsi geliyo. Waxaa xabsiyadda loo taxaabay rag ay ka mid yihiin Shiikh Maxamad Macallin Xasan, Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax, Dr.Yuusuf Xirsi, Dr.Xuseen Barre Muuse.
Sababta ciidankii sirdoonka ee NSS-ta la oran jiray u qaadeen qabqabasho aan loo meel deyin oo ku wajahnayd Islaamiyiinta ayaa lagu tilmaami karay. Iyagoo daba taagnaa xogo ay heleen oo ku saabsanaa kobaca Islaamiyiinta. Intii ka dambaysay dilkiii cullimadii tobanka ahaa ee lagu toogtay fagaaraha Dugsiga Booliska. U diyaar garoowga bud-dhigid X.H.K.S. si looga hortago kacdoon la mid ah kii ay cullimadu ku kaceen kolkii la soo saaray barnaamijkii Xeerka Qoyska ayaa sabateeda la oran karay iska qabqabashadaas baahsanayd.
U diyaar garoowga bud-dhigidii Xisbigii Hantiwadaaga Kacaanka Soomaaliyeed (X.H.K.S.) si looga hortago kacdoon la mid ah kii ay cullimadu ku kaceen kolkii la soo saaray barnaamijkii Xeerka Qoyska ayaa sabata la orankaa qabqabashadaas baahsanayd. Inta12 lagu gudda jiray yagleelidda X.H.K.S. waxaa ka fursan waa noqotay in xabsiyadda la dhigo siyaasiyiinta iyo Culi’madda caanka ah. Dhalinyaradii hormuudka u ahayd baraaruga diiniga ah ee waqtigaas socday. Waxaa xubnihii la xir-xiray ka mid ahaa Nuur Baaruud, Cismaan Cabdulle Rooble, Cabdiraxmaan Faarax Faahiye, Cabdulqaadir Axmad Xirsi (lakari), Cabdi-waaxid Xaashi Xasan, Najiib Cali Mire, Cabdul-qaadir Axmad Warsame, Shariif Axmad Calawi.
Dr.Yuusuf Xirsi oo ka mid ahaa aqoonyahanadda Soomaaliyeed ayaa ku soo bandhigay Buugiisa la yiraahdo Xabsigaygii siday u dhacaday qabqabashadii baahsanayd ee Ciidanka Nabad Sugidu fulliyeen habeenkii 19 May 1976-dii oo xabsiga lagu dhigay in ka badan 50 qofood oo ahaa siyaasiyiin iyo rag magac leh. Kama marnayn Islaamiyiinta oo iyaga si gaar ah loo bartilmaamedsanayey. Waxaa habeenkaas qab-qabashada ku jiray Cabdulqaadir Shiikh Maxamuud (Genay). Balse isagu maalma gaaban hortood dalka isaga baxay.
Avv.Xuseen Cabdulle Codweyn ayaa fasiraya qabqabshadii dadkii isku dhafka ahaa ee Kacaankii Oktoobar xabsiga dhigay Sandkii 1976-dii iyo ka horba. Dadkaas la qabqabtay waxay Nabad Sugidu u samaysay Gal dambiyeed loogu magac daray Wadaad Xume. Waxaa kaloo uu sheegay.
’’ Qadiyadda iska xir-xirka dadku waxay ahayd dhaqan Shuuciyadu leedahay. Waxaa ku xigtay in dadka la iska xir-xiro in dadka la laayo. Ujeedada oo dhamina waxay rimanayd in dadka gacan bir ah lagu qabto.gaar ahaan waxgaradka,aqoonyahanada, cullimadda, ganacsatadda.”
Avv.Xuseen Cabdulle Codweyn ayaan waxaa weydiiyey inuu ka mid ahaa dadkii la xiray xilligaa?
’’ Haa. Waa ka mid ahaa. Waxaa la xiray Bishii May 1976-dii iyadoo la i soo daayey 26 Oktoobar 1978-dii. Waxaa soo dayntayda dad badan oo aan ka mid ahaa lagu beegay maalintii dilka lagu fuliyey askartii afgmbiga samaysay 9 Aprile 1978-dii.’’
Waxaa lagu dhawaaqay asaaskii Xisbiga Hantiwadaaga Kacaanka Soomaaliyeed 01 July 1976-dii.kolkii la isugu keenay Kulliyadda Ciidamada lagu tababari jiray ee Jalle Siyaad 3000(Sadex Kun) oo ergay. Kuwaasoo u badnaa xubno la iska keenay madasha si looga ansaxsado waxyaabihii uu ku tala galsanaa Madaxweyn Maxamed Siyaad Barre.
Bud-dhigida X.H.K.S waxaa lagu beegay maalintii Gobanimadda Soomaaliya si loogu iloowsiiyo dadka Soomaaliyeed maalintaas xusuusta leh. Golaha dhexe ee X.H.K.S. waxaa uu ka koobnaa 78 xubnood oo u badnaa askar iyo taageerayaasha Kacaanka intoodii lagu kalsoonaa. Madaxweyne Maxamed Siyaad waxaa halkaas loogu aqoonsaday inuu yahay Xoghayaha Guud ee Xisbiga H.K.S oo ah xisbiga keliya ee dalka ka taliya (One Party System). Waxaa kaloo la siiyey jagooyinka kala ah Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha. Kolkaas ayaa Maxamed Nuur Shareeco waxaa uu ku heesay.
’’ Horta Qabo Siyaado Bal Qof Kale Ku Soo Dara.’’
Gen.Axmed Suleemaan Dafle oo ka madax ahaa sirdoonkii kacaanka NSS-ta. xubni ka ahaa Guddigii siyaasadda isla xisbaigaas. Isla markaa uu sodog u ahaa Jalle Maxamed Siyaad Xoghayihii guud ee XHKS, ahaana Madaxweynihii Soomaaliya ayaa isaga shakhsiyan loogu xilsaaray caburinta Islaamiyiinta. Ciidankii Nabad Sugida NSS-ta wuxuu kacaankii Oktoobar ku sharciyeey xeer13 N0-14 soona baxay 14 Feberaayo 1971-dii. Xubnaha loo xulay inay hawshaas sirdoonka qabtaan ayaa laga kala keenay ciidankii Xoogga Dalka iyo Booliskaba. Genaraal Dafle kama baaqsan inuu hawsha u qabto sidii uu rabay hogaamiyihii dalka ee berigaas Jalle Siyaad oo ay isaga ka go’nayd in cagta la mariyo cid kasta oo ka hortimaadaa afkaarta kacaanka uu madaxda ka ahaa. Gen.Dafle kumana guulaysan inuu ka adkaado xooggagii Islaamiyiinta. Keliya wax ayuu sii fogeeyey iyo Islaamiyiinta oo adkaysi u sii yeeshay iska caabintii kooxihii kacaanka ee iyaga dagaalka ku hayey.
Nabad Sugidii( NSS-tii) iyo kaadirkii XHKS waxay si baaxad leh dagaal bareer ah ugu qaadeen Islaamiyiinta. Iyagoo xeel ahaan u adeegsanaya ololihii loo yaqiinay tabeelayaasha xaafadaha oo si fudud loogu la socon karay dhaqdhaqaaq kasta ee ka jiray dalka. Waxaa laga warhayey guri kasta iyo qofkasta ee ku nool tabeelaha ama unug xaafaddaas wax uu qabto iyo waxa uu aaminsan yahay iyo weliba kacaanimadiisa inta lagu kalsoonaan karo. Iyadoo intaas u sii dheereyd Xisbiyiinta iyo Ururadda Bulshada, haweenka,.Dhalinyaradda iyo Kuwa Shaqaalaha. Ciidankii Guulwadayaasha ayaa 24 saacadood oo kasta xogta xaafadda u soo gudbin jiray Madaxtooyadda. Hayadda sir doonka NSS-ta.
Cadaadiska saaraa Islaamiyiinta iyo siyaasiyiinta loo arkayey inay ka soo horjeedaan hanaan u socodka Kacaanka Hantiwadaaga ah ee Soomaaliya ka saanqaaday. Ayaa ahaa mid nooc kasta leh oo la doonayey in lagu caburiyo garashada ka duwan tan kacaanku qabay. Dadka noocaas ah waxaa lagu hayey xabsiyada kala ahaa Mandheera. Laanta Buur. Ka gadaalase waxaa loo wareejiyey Xabsi si gaar ah loo dhisay, looguna tala galay siyaasiyiinta ka soo horjeeda Kacaanka Oktoobar. Bal ila yara eeg aqoon yahan Prof Yuusuf Xirsi Axmed oo isagu Buugiisa Xabsigaygii ku soo gudbinayaa waxyaabihii Xabsi Siyaasigii Kacaankii galeyey uu kala kulmay.
’’ 01 May 1977-kii oo ku beegnayd maalinta shaqaalaha Aduunka ayaa habeenimadii kol ay saacadu ku beegnayd 11:00 ama shantii habeenimo ayaa qolkii aan ku xirayn aniga Yuusuf Cismaan Samantar(Bardacad), Cabdiraxmaan xaaji Cabdi Gole (Aswad), Cali Canbe iyo Maxamed Xareed. waxaa naloo dareershay dhinaca Qamta ee Xabsiga aan ku jiray ee Laanta Buur..’’
Waa sii waday sheekadiisii Xabsiga
’’ Waxaa nala keenay daarada qaybta Qamta ee Xabsiga Laanta Buur. Meel muuqaal wanaagsan oo dhirta geed hindiga loo yaqaani haraysay. Waxaan ku fariisanay kuraas dhagax ah oo lagu xardhay mar-mar. Mudo laba saacadood ah markaan fadhinay ayaa xabsiga qaybta Qamta waxaa laga soo saaray rag ay ka mid ahaayeen Shiikh Maxamed Macallin, Maxamed Ibraahim Cigaal, Shiikh Cabdiqani Axmed, iyo Janaraal Cabdulaahi Hoolif. Janaraal Maxamed Abshir waa la soo saaray laakiin il gaar ah ayaa lagu eegayey ma arag.’’
Prof.Yuusuf Xirsi Buugiisa Xabsigaygii ee la daabacay 2001-dii boggiisa 22-aad waxaa uu ku qoray in goortii waqtigu ahaa labadii dambe ee habeenimo ( sideeda saaca) ee 01 May 1977-dii lagu amray inay baabuurta fuulaan. Aniga, Shiikh Maxamed Macallin iyo Maxamed Ibraahim Cigaal hal dhinaca ayaa fariisanay. Waxaa dhinaca kale ka fadhiyey baabuurka aan wada saarayn oo nagga soo horjeeday Yuusuf Cisamaan Samantar (Bardacad), Cabdulraxmaan Aswad, iyo nin kale. Markii baabuurka nala saaray ee qof walbaa fariistay ayaa lugaha waxaa looga qoofalay silsilado si aanu qofna u hawaysan inuu cararo. Iyadoo intaas ay sii dheerayd ilaaladda xoogan ee baaburta aan saarayn korka ka ilaalinaysay. .
Waxaa uu Prof.Yuuusf Xirsi xusay safarkii dhibka badnaa intii maxaabiistaas siyaasadeed loo sii waday Xabsiga Laabaatan Jirow. Isagoo sheegay in ku dhowaad kontomeeyadaas maxbuus ahaayeen kuwii ugu horeerey ee Soomaaliya oo lagu furo Labaatan Jirow Xabsigaas la magac baxay.
Bishii Agoosto 1977 ayaa waxaa si gaar ah loogu xiray meel Qamta la yiraahdo oo ka gaar ahayd Xabsi weynaha Labaatan Jirow rag ay ka mid ahaayeen Maxamed Abshir, Shiikh Maxamed Macallin, Shiikh Cabdiqani Shiikh Maxamed, Maxamed Ibraahim Cigaal iyo Cali Hayje nin la oran jiray oo isaga markii dambe lagu dilay Xabsiga Labaatan Jirow.
Ciririgii siyaasadeed iyo la socodka dhaqdhaqaaq-yadooda ee kacaankaasi saaray Islaamiyiinta kama hakin ujeedooyinkoodii. Waxay si mug ah u lahaayeen isku xirnaansho iyo wada shaqayn taas oo ay ku jaah-wareereen NSS-tii. waxaa la qiraa in Islaamiyiintu xilligaa adkaa kaga soo gudbeen adkaysi iyo dulqaad xad dhaaf ah oo ay arrimaha ugu dulqaadanayeen si aan caadi ahayn. Taasoo ku riixday inay higsadaan maanta halka ay ku haminayaan oo ah hanashada hogaaminta awooda dalka iyo dadka Soomaaliya. Wadan in ka badan 17 Sano aan helin dawlad hogaamisa isla markaana hanata maamulkiisa .
Islaamiyiinta ayaa lagu tilmaami karay in kaga faa’iidaysteen waqtigaas inay afkaartayrabeen ka dhaadhiciyaan shacabka oo ahaa in shuuciyaynta dadku ay tahay ka saarida diintooda. Waa la oran karay inuu fikirkoodaasi miradhalay ka dib markay dadku bilaabeen inay diintoodau soo noqdaan. Isla markaan barashadeeda si qoto dheer u fahmaan.
Xubnihii14 ka midka ahaa Islaamiyiinta oo la qabqabtay bartamihii sanadkii 1976-tii ayaa kuwoodii ugu horeeyey waxaa laga soo daayey xabsiyadda dabayaaqadii Sanadkii 1977-dii xilligaas oo siyaasadii XHKS caga dhigatay. Qodobka loo cuskaday xabsigooda qarkood wuxuu ahaa qodobka 52-aad ee xeerka anshaxa. Waxaa xusid mudan in qodobkaasi uu ahaa mid loogu tala-galay dumarka jirkooda ka ganacsada, kaas oo saamaxayay in qofka eedeysan, saddex cisho lagu hayo xarunta booliskaka dabadeedna ama la daayo ama loo gudbiyo maxkamaddii ku caddeyn lahayd dembiga.
Sanadkii 1977-kii iyo ka horba waxaa wadanka ka baxay xubno muhiim ahaa oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Islaamiyiinta. Waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadir Shiikh Maxamuud, Axmed Nuur Carab, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, Axmed Cismaan Dheel, Cabdisalaan Cismaan Cabdisalaan iyo rag kale oo badan, waxayna kicitimeen wadanka Sacuudiga iyagoo halkaas ka galay jaamacado islaami ah, kana soo kororsaday aqoon diineedkii loo baahnaa. Waxaa saldhigtay fidinta dacwadda dalka gudihiisa. Iyadoo uu mira dhal noqday halgankii baraaruga dadka ee dhinaca diinta.
Khilaaf ayaa soo kala dhexgalay xagga fikirka ah Islaamiyiintii. waxaa meesha ka baxay dhaqdhaqaaqii la oran jiray Al-ahli oo isagu shaqaynayey Sanadkii 1971 ilaa 1977-dii. Khilaafka ku soo kordhay Islaamiyiinta Soomaaliya ayaa xiriir la lahaa kooxihii Islaamiyiinta Masar ee xabsiyadda laga soo daayey, waxaana la xusaa in Sheikh Cabdulqaadir Sheikh Maxamuud inuu markaas u Janjeersaday afkaarta kooxda Jamaacatul Mu’minuun dadka badankiisu u yaqaanaan Tak-fiir. Warar dad dhowr ahi ii sheegeen ayaa waxaa ka mid ahaa in Islaamiyiinta badankoodu kuwa joogay gudaha Soomaaliya ay qaateen fikirka Jamaacatul Mu’minuun. Marka laga reebo xubnihii ku jiray Xabsiyadda. Hase ahaate markiiba waa laga noqoday qaadashada afkaarta takfiirnimadda. Kolkii loo caqli celiyey in badan oo ka mid ahayd dhalinyaradii Baraaruga Islaamka.
Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax ayaan si aan u xaqiiqsado u janjeersiga dhalinyaradda Baraaruga ee dhinaca Takfiirka. Waxaan weydiiyey waxa ka jira arrinkaas. Waxaa uu si guud mar ah iigu jawaabay:-
’’ Fikirkaasi waxaa uu asal ahaan ka yimid Wadanka Masar. Kolkii dawladaasi xirxirtay oo ciqaabtay Muslimiinta xabsiyadda ku xirayd. Waxay fikradu ka soo faaftay xabsiyada Masar’’
Sidee ayey inaga Soomaali ahaan inoo saamaysay?
’’ Dhalainyaradii Baraaruga Islaamka ee Al-Ahli ayaa joogsanweyday. Maadaama kacaanku xabsiyadda dhigay cullimadii waaweynayd ee hagi jirtay baraaruga Islaamka. In badan oo dhalinyaradda ahayd oo dhinac u liicday waa jireen; Balse markii dambe ee cullimadda xabsiyadda laga soo daayey ayaa si weyn wax looga qabtay. Oo si aad ah loogu caqli celiyey dhalinyaradii degdegaysay.”
Sidoo kale waxaa dhinac noqday ururka Al-Islaax Shiikh Maxamed Garyare ayaa dhinaca ula ruqay. Ururkii Jamciya Islaamiya waxaa madax looga dhigay sheikh Maxamuud Cumar. Iyadoo Waqooyiga Soomaaliya uu ka jirtay ururu Islaamiya oo la oran jiray Waxdada. Waxaa kaloo jiray xarako la yiraahdo Aalla Sheikh oo uu madax ka noqday Sheikh Maxamed Macallin kolkii xabsiga laga soo daayey1978-dii. Bilowgii Sanadkii 1978-kii ayaa noqday Sanad ku kowsaday khilaafka Islaamiyiinta Soomaaliya u dhexeeyaa iyo asaasid ururuo Islaamiyiin ah xanbaarasan fikirka Islaami Siyaasi..
Dagaalkii 1977-kii ee Soomaalidu la gashay wadanka Itoobiyakama marnayn in xooggaagii dagaalamayey ay ku dagaalamayey si jihaad ah isla markaana fulinayeen qodob diimeed ah xoraynta dhulka Islaamka ee la haysto (Ogaadeenya).
Saraakiisha ka tirsanaa Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ka qayb gashay dagaalkII Ogaadeenya ayaa in badan oo ka mid ahaa waxaa saaqday saxan saxada dabaysha diinta. Kuwaas oo ku hamiyeey inay Soomaaliya u horseedaa dawlad Islaami ah. Waxaa xubnahaas ka mid ahaa Shiikh Xasan Daahir Aweys iyo rag kale. Xunaha ka mid ahaan jiray Ciidankii Xooga Dalka Soomaaliyeed ee sida weyn uga qayb qaatay ku baraarujinta Islaamka bulshadda Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa Shiikh Maxamed Cali Dahir oo door muhiim ah ku yeeshay kobcinta Islaamka.
Ustaad Cabdulraxmaan Baadiyow15 oo ka mid ah aqoonyahanadda Islaamiyiinta, kana tirsan xarakada Al-Islaax ayaa waxaa la weydiiyey maxaa lagu garan karaa muuqaalka baraaruga islaamka? Waxaa uu ku jawaabay:
” Waxaa lagu garan karaa(baraarugaas) sida looga hadal-hayo warbaahinta caalamka oo dhan iyo sida ay u soo kordhayso ka qaybgalka xisbiyadda Islaamiga ah ee xukunka iyo siyaasadda. Gaar ahaan dalalka ay ka jirto doorashooyinka iyo tartanka siyaasada. Meel kasta waxaa lagu arkaa muslimiin ka shaqaynaysa soo noolaynta ku dhaqanka diinta islaamka, waxayna ka muuqataa dugsiyadda, masaajiydyada, jaamacadaha, goobaha shaqadda, ganacsiga, waxay kaloo ka muuqataa dhaqanka nolosha, xiriirka qoyska, qaabka salaanta iyo asluubta dadka iyo weliba bangiyadda islaamka oo si weyn ugu fiday dunidda daafaheeda.’’
Sanadkii 1991-kii horaantiisii kolkii dawaldii dhexe Soomaaliya dhidibada u siibeen kooxihii hubaysnaa ee ay horboodaysay USC-du. Ayaa waxaa soo baxay marnaansho awoodii dawladnimo ee dalka. Iyadoo kooxihii meesha ka saaray dawladu aysan karti u yeelan inay buuxiyaan kaalintii dawladnimada, saxaanna khaladdaadkii kacaankii Oktoobar ee wadanka xukunkiisa hayey 21 Sano.
Islaamiyiinta ayaa ahaa kooxaha keliya ee diyaarsan,lahaa istaraatijiyad fog. Kolkay burburtay dawladii dhexe ee isku haysay Soomaaliya. Wax walba oo lahaa astaanta dawladinmada ayaa la waayey gebi ahaanba. Markale ayey ka faa’iidaysteen Islaamiyiintu marnaansha dawladnimo. Iyagoo si qunyar socodnimo ah u bilaabay inay buuxiyaan kaalintii dawladnimo. Marka laga eego dhinaca u adeegida bulshada.
Islaamiyiinta ayaa waxay badbaadinaayey dadka la beegsanayey,waxayna ahaayeen kooxaha keliya ee qabiilooyinka dhexmari kara wax u kala gudbinkara maadaama dalkii Soomaaliya la oran jiray dagaal sokeeyey hareeyey. Dhaqaalaha dalka ayey raad ku yeesheen Islaamiyiintu weliba si xawli ah. Iyaga ayaa noqday kuwa la aamini karo dhan ganacsi iyo dhaqaale-ba. Waxaa bilaabantay inay si fudud u noqdaan ganacsadayaal cusub oo buuxiya doorkii ay baneeyeen ganacsatadii hore maadaama wadanku dhinac walba ka burburay. Waxay gacan ku qabteen dhinaca Waxbarashada oo durba asaaseen Tacliin ku salaysan aqoonta maadiga ah iyo mida diineedba. Iyaga ayaa noqday u heelanayaasha keliya ee ku hawlan Waxbarshada dalkaas burburay.
Arrimahaas aadka isku milaa ayaa Islaamiyiinta aad iyo aad ugu sahleen inay hantaan quluubta shacabka Soomaliyeed intooda badan, sumcadoodana kor u qaaday. Waxaa iska cadayd waxqabadkoodaas muuqanayey inuu lahaa koboc siyaasadeed oo qorshaysan, kuna jihaysan meel la higsanayey. Waxaa kaloo soo ifbaxayey in dacwadii diinta ee baraaruga laga feer bilaabay dhaqdhaqaaq abuuritaan cudud ciidan oo ku jihaysan jihaad.
Hogaamiyihii Al-itixaad Shiikh Cali Warsame waxaa uu ka soo noqday isaga iyo taageerayaashiisiba xeryaha Qaxootiga ee Bariga Itoobiya. Kolkii la riday dawladii uu madaxda ka ahaa Maxamed Siyaad Barre. Sidoo kale xubnihii ururkaas ee Al-itaxaad, kana soo jeeday qabiilka Daaroodka ayaa iyaguna saldhig ka dhigtay Kismaayo. Qabiilooyinka kale wadadii ahaa waxay ku negaadeen Muqdisho. Waxaa halkaas laga dareemi karay kala miiransho ku timid Islaamiyiinta oo qudhooda uu saameeyey qabiilku. Hase ahaatee waxay Islaamiyiintu ahaayeen kuwa diidayey inay kala miiransho ku timid iyaga. Waxay waqtigaas Islaamiyiinta uu horboodo ururka Al-itixaad ku fekerayen in meel ka mid ah Soomaaliya ay ka dhisaan nidaam Islaami ah oo waqtiga dambe ku baaha Soomaaliya oo dhan.
Kolkii Soomaalidu faraha kula jirtay dagaalkii sokeeyey ee dhiiga badan ku daatay. Islaamiyiintu gaar ayey u taagnaayen iyagoon qabiilna la safan. Kama maqnayn inay abuurayeen cudud ciidan oo dhinac walba kaga wanaagsan maleeshiyaadka qabaa’ilka ee sida waxshnimadda ah u dagaalamay.
14 Aprile 1991-dii ayey Islaamiyiin si sibiq ah waxay u galeen dagaalay kaga horimanayeen maleeshiyaadkii USC-da una hogaaminayeey Gen.MFCaydiid Buundada Araare una dhow magaaladda Jamaame gobolka Jubadda Hoose. Warqad ay Islaamiyiintu u gudbiyeen Gen.MFCaydiid, uguna sheegayaan inuu ka laabto duulanka uu ku yahay magaaladda Kismaayo. Waxaa warqadaas Gen.MFCaydiid u gudbiyey xubno ay isku beel ahaayeen oo ka tirsanaa kooxaha Islaamiyiinta. Waa uu ku gacan sayray baqoodaas. Waxaa la sheegaa inuu warqadaas gaarsiiyey Shiikh Xasan Dahir hogaamiyaha USC-da Gen.MFCaydiid . Waxaa la isweydiin karayey sida Shiikh Xasan Dahir Aweys ku tegey magaaladda Kismaayo?
Sida dad xogogaal ahi ii sheegeen Shiikh Xasan Dahir Aweys waxaa uu ku sugnaa magaaladda Qoryooley. Kolkii ciidamadda Daroodku qabsadeen dagaamadda Shabeeladda Hoose bishii Maarsi 1991-dii dagaalkii loo yaqaanay rogaal celinta. Lama aqoon Shiikh Xasan Daahir. Waxaase laga baqay inay dad aan xil kas ahayn farta ku fiiqaan xilli Soomaalidu isu ugaarsanaysay qabiil qabiil. Xubno ay saxiib ahaayeen una badnaa Al-itixaad ayaa si hufan uga soo saaray Shiikh Xasan Dahir Qoryooleey, una soo gudbiyey Kismaayo. Inta uu joogay Kismaayo waxaa uu ku sugnaa Xeradda Ciidamadda ee Guulwade. Halkaas ayaa waxay saldhig u ahayd Dagaalyahanada Al-itixaad. Waxaa uu isku dubariday hawshii ciidamadda ee halkaas ka socotay. Uma dhegjalaq siin xaalada kolkaas ku sugnayd Kismaayo oo ahayd halka laga soo duulayey Muqdisho. Waxaa Shiikh Xasan Dahir ahaa mid ku hawlanaa hawlihiisa uu hayey ee ku aadanaa Maktabka Jihaad ee Al-itixaad. Ma ahayn waqtigaas nin caan ah oo si weyn loo wada yaqaano.
Islaamiyiinta Al-itixaad waxaa saldhigyadooda Kismaayo kala ahaayeen Saddexda meelood ee ahaa xeradda Guulwade,Dekadda Kismaayo,Xarunta Keydka Shidaalka Kismaayo. Waxaa lagu qiyaasi karay xoogaga Islaamiyiinta ee ku sugnaa magaaladda Kismaayo ugu yaraan Sideed Boqol oo dagaal yahan oo tababaran , diyaarna u ahaa inay dagaal galaan.
Gen.Maxamed Faarax Caydiid wuxuu ku gacan sayray baaq Islaamiyiintu u doreen.. Waxaa uu dhinaciisa u soo jeediyey talo ah inay xeryahooda ciidankoodu ku ekaado. USC Waxay ka helayaan amaan ah inaanay faragashan dooni hawlahooda u gaarka ah. Shiikh Xasan Dahir Aweys oo ka mid ahaa xubnaha qoraalka soo gaarsiiyey Gen.MFCaydiid isagu dib uguma noqon Kismaayo ee waxaa uu u soo kicitimay dhinaca magaaladda Muqdisho.
Sidoo klae ayaa Al-itixaad waxay isku khilaafsanayd dagaalka laga bar bar dagaalamayo qabiilooyinka. Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax ayaa kula taliyey hogaamiyayaasha ciidamada Al-itixaad ee tira ahaan u badnaa qabiilka Daroodka inay faaruqiyaan xeryaha Ciidan ee ay ku leeyihiin Kismaayo, loona raro ciidamadda Dhooblay. Sidan waxaa ii sheegay xubin ka tirsanan jiray Al-itixaad oo aan ku waraystay Bosaaso, igana codsaday inaan xusin magaciisa. Waxaa kaloo uu intaas iigu daray garabkii ciidamadda ee Al-itixaadkii Kismaayo joogay inay ahaayeen koox si gaar ah u doonaysay inay awood helaan. Waxa kaloo uu yiri:-
’’ Muqdisho waxaa nooga yimid xilligaas aan joognay Kismaayo 1991-kii Wafdi ka socday Al-itixaad. Waxay noogu caqli celiyeen inaan la gelin dagaal lala safto qabiilooyinka. Iyagoo ka digay hadii lala safto qabiilooyinka ururka Al-itixaad ku yeelan doono raad. Taladaas waxaa diiday hogaankii dagaalyahanadda Al-itixaad ee Kismaayo iyagoo qiil ka dhigtay inay naftooda daafacayaan.’’
Dagaalkii ka dhacay Araare waxaa uu ahaa mid u dhexeeyey kooxaha Islaamiyiinta iyo USC-da uu hogaaminayey Gen.MFCaydiid. waxaan goobjoog u ahaa Aniga Cabdishakuur ahi in dagaalkaasii ahaa mid faraha laga gubtay. Iyadoo dharbaaxo culusi ku dhacday maleeshiyaadkii USC-da. Halis ayuu galay hogaamiyihii Gen.MFCaydiid inuu u gacan galo kooxihii Islaamiyiinta ee ka dagaalamayey goobta Araare.
Waxaa xoogaga Islaamiyiinta ee ku sugnaa xeradda Guulwade ee magaaladda Kismaayo dagaal gelinaayey xubno afar ahaa oo ka soo dagaalamay wadanka Afganistaan, uuna ka mid ahaa ninka lagu magcaabo Ibraahim Afqaan iyo Sheikh. Col.Maxamuud Ciise (Abuu Muxsin), intaanu dhinaca Muqdisha u safrin Xasan Dahir waxuu masuul ka ahaa Maktabka Jihaadka iyo weliba isagoo ahaa ku xigeenka hogaamiyha ururka Al-itixaad. Hogaamiyaayaasha Al-itixaad ee dagaalka lagaga hortagayey Gen.MFCaydiid waxay u arkayeen fursad qaali ah gelitaanka dagaalka iyo inay degaankaas ka abuuri karaan awood Islaamiya oo waqtiga dambe hanata wadanka Soomaaliya oo xilligaas ku jiray biloowgii dagaalka sokeeye iyo abuuris dawlad Islaami ahba. Sida uu ii sheegay mid ka mid ahaa dagaalyahanadii Al-itixaad waxaa jiray khilaaf aan soo shaac bixin ee u dhexeeyey rag dagaalka Islaamiyiinta Hogaaminayey gaar ahaan labada nin ee ciidamadda Al-itixaad goobta dagaalka masuulka uga ahaa Faarax Xasan (Waji Xun) iyo Cabdulaahi Raabi Kaahin.
Dagaalkii Araare waxaa ku gacan sareeyey Islaamiyiinta oo si adag isaga caabiyey duulaanka xoogagii USC-da. Islaamiyiinta ayaa waxaa dhabar wareemay xoogagii ka soo horjeeday USC-da ee uu hogaaminayeey Gen.MSMorgan oo iyagu is tusay hadii Islaamiyiintu guulaystaan inaan gacani wax ugu jireyn laga saari doono degaanka si isku mid ah iyaga iyo USC-daba. Waxay ka doorbideen guusha Islaamiyiinta inay magaalda Kismaayo gacanta u gasho Gen.MFCaydiid.
Qormadda Kow iyo Tobnaad.
Kooxaha sida fog daacadda u ahaa Gen.MSMorgan ee ka barbar dagaalamayey Islaamiyiinta waxay baneeyeen aagii ay difaaca uga jireen si aanay u guulaysan Islaamiyiinta oo dagaal gacmaha la isula tegey kaga soo horjeeday ciidamo lagu qiyaasay 3000 (saddex kun) oo dagaal yahan iyo in ka badan 120 (boqoliyolabaatan)gawaarida tiknikada dagaalka ah. Iyadoo tiradda Islaamiyiinta ee waqtigaa dagaalka ku jirtay lagu qiyaasay 500(shanboqol). Xooga kale ee u harsanaa Al-itixadad waxaa laga dhigay kayd ciidan. Islaamiyiinta dagaalka Araare ee agagaarka Jamaame waxaa hogaaminayey Col.Maxamuud Ciise(AbuuMuxsin), Ibraahim Afgaani, Col.Cabdulqaadir Macallin, Col.Faarax Xasan (Weji xun).
Fikirkii Gen.MSMorgan ee ahaa in la jebiyo kooxihii islaamiyinta ka dagaalamay aagaas waa uu guulaystay. Waa laga gacan sareeyey Islaamiyiintii Al-itixaad. Waxaa dagaalkii Araare kaga geeriyooday Al-itixaad inta u dhexeysa Konton ilaa Lixdan dagaal-yahan,waxaana kaga dhaawacmay inta u dhexeysa 110 ilaa120 dagaalyahan. Sidoo kale waxaa USC-da soo gaaray dhimasho iyo dhaawac intaas ka fara badan. Waxaan dagaalkaas Gen.MFCaydiid uga hooseeyey hogaamintiisa Col.Cabdi Qaybdiid oo ah ninka inta badan geystay tacdiyadii ay galeen maleeshuiyaadkii USC-da ee ka dagaal galay Jubadda Hoose..
Waxaa la arkayey inuu jiro qorshe midaysan oo ay qabeen hogaamiyayashii dagaalka sokeeyey ee Soomaaliya horkacayey. Iyagoo ka soo wada horjeeday kooxaha Islaamiyiinta ah. Gen.MFCaydiid iyo maleeshiyaadkii uu hogaaminayey waxay Kismaayo soo galeen 25Aprile 1991-dii. Iyagoo soo jiiray difaacii dagaalyahanadii Al-itixaad oo dagaalka ay uga bexeen qabiilooyinkii ka feer diriraayey ee la haybta ahaa.
Soo gelitaankii USC-da ee Kismaayo. wax yar ka hor waxaa dekeda Kismaayo ka furtay Markab lagu magacaabi jiray M/V Kuanda. Kaas oo u raraa hay’adda ICRC-da. Waxaa Markabkaas xoog ku kaxaystay dagaalyahanadii Al-itixaad ee gacanta ku hayey Dekedda. Waxaa Markabka ka raacay Kismaayo ilaa 600(lix boqol) qof oo u badnaa Al-itixaad iyo taageerayaashooda. Waxay Al-itixaad ku rarteen Markabkaas hubkoodii intiisii badnayd. Iyagoo hubkaas kala degey Markabka kolkii uu gaaray Raas-Kambooni.
Dhamaan ragii saaraa M/V Kuanda waxaa loo dejiyey xeebta Ras-Kambooni. Iyadoo lagu wargeliyey si khiyaama ah in Markabku ciladaysan yahay. Waxaa loo abaabulay si koox koox ah. Iyadoo qaar loo diray inay qoryaha wax lagu karsanayo soo guraan. Hawlaha socda iyo in Markabku tegeyo Al-itixaad waa ay la socdeen. Keliya hadafkooda ayaa ahaa inay helaan rag dagaalama oo la mabda noqda. Sidaas ayuu ku ambabaxay M/V Kuanda iyadoo aan laga warhayn. Weli dadkii Markabkaas raacay waxay ka sheekeeyaan tacadigii dagaalyahanadda Al-itixaad kula kaceen dadkii saraa Markabkaas.
Ras-Kambooni ayaa noqotay saldhiga ay isku urursadaa xoogagii Islaamiyiintu ee ka soo jabay Kismaayo. Iyadoo si dhaqso ah qaab ciidan isugu habeeyey. Waxaa jiray dagaalyahano ka tirsanaa Al-itixaad oo dhaawac ahaa iyagoo doon loogu qaaday Boosaaso. Waxaa Doon lagu magacaabi jiray Nabiyuu-Bismilaaha keentay 24 Aprile 1991-kii dhaawicii Islaamiyiinta dekadda magaaladda Boosaaso .
Run ahaantii dagaalkii ka dhacay Araare waxaa uu shaki soo kala dhex geliyey kooxaha Islaamiyiinta oo u kala miirmay si muuqata qabiilooyinkii ay ka soo jeedeen. Waxaa soo shaac baxay kala qaybsanaatoodaa. Iyadoo kooxiba kooxda kale ku eedaysay inay xadgudub sameeyeen ku aadanaa dhinaca mowaaqifa ahayd inay dhex ka noqdaan dagaalka qabiilooyinka u dhexeeyey. Waxaa intaas barbar socotay barabugaanda dagaal oogayaashu ku hayeen inay Soomaaliya ka soo shaac baxo fakir kale oo ka duwan tan ay aaminsan yihiin ee ahayd in Soomaalidu qabiil qabiil u kala haysataan.
Magaalada Muqdisho ayaa tageerayaasha USC-du waxay Islaamiyiinta u arkayeen inay yihiin kuwa u adeegay qabiil iyaga cadow u ah. Waxaa maalmahaas caan noqotay kooxaha Islaamiyiinta ah oo qabiil qabiil ciidamo u samaysanaya. Halkay waqtigii hore ka ahayeen kuwa isku duuban oo mid ah. Dagaalkii Araare waxaa keliye ee laga bartay ayaa ahayd sida fudud ee kooxaha Islaamiyiinta ah u degdegaan iyagoon qorshaynsan istaraatijiyad ay u dhan yihiin. Waxaa kaloo Al-itixaad lagu amaanaa sida geesinimadda lahayd ee ay dagaalka uga qayb qaataan goobaha la iskaga horyimaado.
Islaamiyiinta ayaa iyagu ka gilgisha hadaladda siyaasad ahaan lagu durayo amaba iyaga lagu dhaleecaynayo afkaartooda. Dagaalkii ka dhacay Araare Islaamiyiinta ku abtirsadda qabiilka Daaroodka ayaa la yiraahdaa inay si qabiilinimo ah dagaalkaas uga horyimaadeen maleeshiyadii USC-dii Gen.MFCaydiid oo baacsanayeey ciidamadii qabiilka Daaroodka ee sida awooda ah ku tegey daafaha magaaladda Muqdisho. Iyagoo qarka u saaraa inay qabsadaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho.
Su’aal la isweydiin karo ayey noqotay. Maxay Islaamiyiinta Kismaayo ku sugnaa u hor istaagi waayeen ciidamadda Daaroodka ee duulaanka ku soo ahaa Muqdisho iyo beelaha Hawiye? Maxay labadda ciidan ee dagaalamayey u kala dhex geliwaayeen?
Xubno aan ka soo jeedin Islaamiyiinta Daaroodka oo aan arrimahan wax ka weydiiyey ayaa sheegay in dagaalkii Araare loo wada dhamaa. Marka laga eeggo xagga qabiilooyinka Soomaalida iyo unugyadda ay ka koobnaayeen xooggaga Islaamiyiintu. Inkastoo ay si balaaran u shaacday in Islaamiyiintu fikirka qabiilku soo kala dhexgalay.
Mid ka mid ah aqoonyahanadda Islaamiyiinta oo ku sugnaa Boosaaso ayaan weydiiyey waxa ka jira in qaab qabiil Islaamiyiintu u kala qaybsameen dagaalkii 1991-kii ka dhacay Araare? Wuxuuna iigu jawaabay
’’Arrintaasi sax ma ahan, qabiil qabiilna Islaamiyiintu uma kala qaybsamin.’’
Waxase jiray ayuu yiri
’’ In lagu degdegay in la galo dagaalkii Araare xilligaas’’.
Ibraahim Afqaani ayaa si kale, isna u dhigay dagaalkii Araare. Mar uu tegey Sanadkii 1991-kii magaaladda Nairobi ee Kenya. Isagoo sheegay in fikir ahaan lagu kala qaybsanaa dagaalkii Araare, ayna jirtay sinbiriirixasho qabiil ee dhinaca dagaalkaas sida loo maamulay. Waxaa xusid mudan in Ibraahim Afqaani uu ka mid ahaa hogaamiyayaashii dagaalkaas ka dhacay Araare ee Islaamiyiinta iyo maleeshiyadii Gen.MFCaydiid iskaga horyimaadeen goobtaas.
Dadaal ayaa jiray ay Islaamiyiintii u badnaa ururka Al-itixaad ku hawlanaayeen. kuwaas oo ku wajahnaa sidii mar kale loo midayn lahaa xoogga Islaamiyiinta, meeshana looga saari lahaa kala shakiga soo galay, loona dhayi lahaa diiftii uu reebay dagaalkii Araare. Taas oo keentay tuhma ah in qabiil qabiil loo kala qaybsamo. Wadaada doorka ku lahaa xilligaas waxaa ka mid ahaa Sheekh Xasan Dahir oo isagu si furan u sheegay in laga haboon yahay in la kala qaybsamo, wadar jirkuna uu yahay guusha dhabta ah ee Islaamiyiinta.
Wafdiyo ayaa Islaamiyiintu u kala direen degaanadda Jubadda Hoose iyo Waqooyi Bari si is faham loo dhaliyo, ergooyinkaasina waxay soo hooyeen guul ah in mar kale la mideeyo Islaamiyiinta. Waxaa la qaatay go’aan ah in la xoojiyo awooda goboladda Waqooyi Bari ku leeyihiin Islaamiyiinta maadaama degaan kaasi yahay halka isku xiri karta Konfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya, kuna dhow magaaladda Burco oo xudun u ahayd hogaanka sare ururka Al- itixaad .
Waqtigaas waxaa hoosta laga xariiqay xoogaga ku jira mucaskarka Raas Kambooni in loo soo raro magaaladda Boosaaso. Maadama magaaladaasi tahay magaalo istaraatijiya oo ku dhow gacanka Carabta, buuralayda gollis. isla markaas si toos ah xiriir loogagala samayn karo wadamadda kulaalaya Soomaaliya. Ee islaamka iyo carabtaba ah.
Xoogagii Islaamiyiinta ayaa afar bilood ka dib waxay ka soo guureen Ras-kamboni Bishii Agosto1991-kii. Iyagoo soo degey Dhoobley. Taladooda guud ayaa ahayd Islaamiyiinta in dhica goboladda Bari la soo aado. Halkaas waxaa kaga haray Shiikh Xasan Turki oo diiday inuu soo kicitimo Goboladda Waqooyi Bari. Waxaa uu si toos ah uga amar diiday hogaanka sare ee Al-itixaad. Isaga iyo ciidama taabcsanaa waxay kaga hareen Dhoobley xoogagii u soo guuray Bari. Waxaa kaloo taladaas ku raacay Cabdiraxman Maxamed Jabriil oo u sheegay Al-itixaad inaanay ka soo faa’iidayn aaditaankooda Bari. Waxaa uu ku adkaystay Shiikh Cabdiraxmaan in lagu negaado degaanadda Jubooyinka .
Siyaasad ahaan ayaa waxaa la arkayey xilligaas doorka sii xoogaysanayey ee Islaamiyiinta dhinaca siyaasadda, kobocooda awoodeed iyo hanka hogaamineed ee ay qabaan inay Soomaaliya ku hantaan. Inksatooy jirtay aragti feejigan oo ka imanaysay raga u hanqal taagayey inay gacanta ku dhigaan awooda hogaameneed ee Soomaaliya. Iyadoo raggaasi aalladda ay siyaasadooda u isticmaalayeen ahayd qabiilka oo inta badan dadka Soomaalida ahi u nugul yihiin habar isu wacasho markay timaado. Taas ayaa badiyaa meesha ka saartay in Soomaalidu yeelado hadaf iyo waxay si nuxur ah u aaminsan yihiin, mana lahan waa Soomaaliduye’ asaas siyaasadeed oo ku salaysan axsaab la aaminsan yahay, khibraddan ayaana laga helay waqtigii Sagaalka Sanadood ahaa ee dawladii rayadka ahayd..
Tusaale ahaan marka axsaabta mucaaradka xubnaha ku soo gala barlamaankii Lixdamaadkii doorashadda xilligaas. Ayaa markay ku fariistaan kursiga barlamaanimo. Gadaal u eegi jirin bulashadii soo dooratay ee uu codkooda wax ku helay, waxaana uu si fudud ugu biiri jiray xisbiga S.Y.L. oo ahaa kan ugu weyn ee dawladaas hogaamin jiray. Xaqiiqooyinka laga dhaxlayaa ayaa inoo marag furay sida Soomaalidu uga fog tahay mabda’ la aamino. Balse Islaamiyiintu waxay ay noqdeen kuwii ugu horeeyey ee Soomalida qaraniga labaatanaad ee si dhab ah u aamina waxay aamin san yihiin oo ah in diintu tahay siyaasad sharci, aqoon laguna maamuli karo dadka Soomalaiyeed iyagoo cuskanaya waxaa loogu yeero islaami siyaasi.
What Is the Difference Between Sunni and Shiite Muslims–and Why Does It Matter? TAARIIKHDDA SAYID MAXAMED CABDULLE XASAN 1895-1922